Bumbiro Idzva Rotarisirwa Kupera kweGore
Nyamavhuvhu 24, 2010
Gurukota rezvebumbiro, VaEric Matinenga, vanoti referendamu ichanangana nekutambirwa kana kusatambirwa kwebumbiro idzva
Gurukota rezvebumbiro remitemo pamwe nemabasa eparamende, VaEric Matinenga, vanoti bumbiro idzva remitemo yenyika rinotarisirwa kunge ravapo mukupera kwegore rino, kana kuti mukutanga kwegore rinouya.
VaMatinenga vanoti chikuru chingangonetsa inguva ichapedzwa hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu, uhwo vanotarisira kuti hunofanirwa kupera muna Gunyana.
Mushure mekunyorwa kwebumbiro idzva, pachaitwa referendamu yekuona kuti vanhu vanotambira here kana kuti kwete kunyorwa kwebumbiro idzva.
Pakuitwa kwereferendamu, sangano reChristian Alliance of Zimbabwe rinoti hurumende haifanirwe kungobvunza vanhu kuti vanotambira here kana kuti kwete bumbiro idzva rinenge ranyorwa. Sangano iri rinoti hurumende inofanirwa kuti vanhu vavhotere mibvunzo yose ine zvinhu zvinokosha zviri mubumbiro remitemo. Sangano iri rinoti rakaita ongororo muMatabeleland yakaburitsa zviri kudiwa nedunhu iri.
Asi VaMatinenga vanoti vanhu vachangobvunzwa kuti vanoda here kana kuti kwete zvinenge zviri mubumbiro rose, kwete kunanga mubvunzo mumwe nemumwe, vachiti izvi zvingatoda gore rose kuti vanzwe zvinodiwa nemunhu wese.
Nyaya Ina Nothando Sibanda